နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံ Send | ဒုက္ခသည်စင်တာမှအွန်လိုင်းကနေအရင်းအမြစ်များ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အခြားနိုင်ငံများတွင်လူတွေကိုပိုက်ဆံပေးပို့ရန်လွယ်ကူသည်. နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပို့ပေးရန်အတော်ကြာလုံခြုံပြီးအမြန်လမ်းရှိပါတယ်. Learn how to send money to other countries quickly and safely.
MoneyGram သို့မဟုတ် WalMart2World မှတဆင့်ငွေပို့ပေးရန်, သင်ပထမဦးဆုံးသူတို့အလုပ်လုပ်တည်နေရာကိုရှာဖွေရမယ်. WalMart2World အားလုံး Walmart စတိုးဆိုင်၌တည်ရှိ၏. MoneyGram နေရာများတွင်စူပါမားကက်များမှာ, အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များ, နှင့်ဓာတ်ဆီဆိုင်. သငျသညျဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ငွေသားဆောင်ခဲ့ရမည်. သင်သည်သင်၏အကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်သုံးစွဲဖို့မတတျနိုငျများမှာ.
| သငျသညျအနီး MoneyGram တည်နေရာကိုရှာပါ
| သငျသညျအနီး Walmart တည်နေရာကိုရှာပါ
သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်ပေးပို့လိုပါက, you can use WalMart2World’s online service. သင်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းပါလိမ့်မယ်.With WalMart2World, the money arrives in minutes and the fees are lower. The fees areafixed amount, or “flat fee.” MoneyGram is slightly more expensive and slower. သင်တစ်ဦး Walmart သွားရောက်နိုင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်မူကားကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်မကြာခဏနိုင်ငံတကာကငွေပို့လိုလျှင်, ဘဏ်အကောင့်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးက. Keepingalot of cash in your home is not safe in the USA. It is better to open upabank account. ဘဏ်များနှင့်မည်သို့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်အကြောင်းလေ့လာရန်.
Western Union ဟာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကသူတို့ရဲ့ website သို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်း app ကိုမှတဆင့်ပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သင်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံပို့ပေးရန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကအစသင်တစ်ဦးအခကြေးငွေကောက်ခံသွားမည်. သင်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ရှိမထားဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲ Western Union မှတဆင့်နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးသည်ဒေသခံဌာနခွဲသွားနိုင်ပါတယ်.
| Western Union မှတဆင့်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံ Send
| သငျသညျအနီး Western Union တည်နေရာကိုရှာပါ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုက်ဆံအင်တာနက်အပေါ်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစနစ်က Xoom ဖြစ်ပါသည်. Xoom နှင့်အတူ, သင်ပိုမိုပေးဖို့နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံပေးပို့နိုင်ပါတယ် 100 တရာနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ. Xoom အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်ပိုက်ဆံမပို့၏ကုန်ကျစရိတ်. တခါတရံသတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေဖြစ်ပါသည်. တခါတရံမှာသူတို့တစ်တွေရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံ. You will need to enter bank account details to send money. You will also need the details of the person you are sending to.
Xoom has pickup locations, which means you can send money and someone can pick it up in cash at the other end. တခါတလေ, သင်တို့ဆီသို့မပို့နေသောလူတစ်ဦးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းကဖွင့်ကောက်လို့ရပါတယ်. အချို့နိုင်ငံများတွင်များအတွက်, you can send cash toabank account. If you are sending toabank account, you will need that information, လွန်း.
| တစ်ဦး Xoom အကောင့်ကိုဖွင့်
| Xoom အလုပ်လုပ်တယ်ရှိရာနိုင်ငံများတွင်များစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ
| Xoom အခကြေးငွေအကြောင်းကိုလေ့လာပါ
တစ်ဦးကပိုက်ဆံအလို့ငှာတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့် Pre-အတည်ပြုခြင်းနှင့်များအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာလက်ခံသူ၏အမည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်စက္ကူပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မပြောင်းနိုင်ဟုဆိုလိုသည်. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုက်ဆံအလို့ငှာကုန်ကျစရိတ် $8. 55 အဘို့ အထိတန်ဖိုးများ $700 ($500 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနှင့်ဂိုင်ယာနာများအတွက်). သငျသညျဘဏ်များမှာပိုက်ဆံအမိန့်ရနိုင်, စာတိုက်, တချို့စတိုးဆိုင်များ. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် international money orders from the US postal service.
How costs compare: ကြည့် အားလုံး ကုန်ကျစရိတ်များ. ဒါဟာသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်.